March 2012 - iftineducation.com
Labo Wiil oo ka yaabsaday Bulsho weeynta Caalamka ka dib Indho-sarcaadka ay sameenayaan oo noqday mid aan macquul aheeyn!!
aadan21 / March 29, 2012
iftineducation.com – Labo Wiil oo u dhashay dalka Mareeykanka ayaa waxa ay ku caan baxeen Barnaamishka lagu magacaabo A Normal Day kuwaas oo aalaaba soo saara indhosarcaad dadka ka yaabsaday iyo qiyaas adag oo ruux Beniaadan ah uusan sameeyn karin . Indho-sarcaad ma ahan wax uu qof kasta iska doon dooni karo ee waa wax dadka qaarkiis ay sameeyaan balse…
Haweeney Waayeel ah oo Caado ka dhigatay in ee Kaadideeda ee Cabto kuna qubeesato (Daawo adaaba yaabi doonee)
iftineducation.com – Carrie waa haweeney 53 sano jir oo u dhalatay dalka Maraykanka waxa eena kunooshahay Colorada waana haweeney caado cusub la timid. Haweenaydaan Mareykanka ah ayaa noqotay haweeney Saxaafada iyo Dadyowga Caalmaka si weyn usoo jiidatay kana yaabisay kadib markii ee lasoo baxday dhaqamo Cusub aan horey loo arag. Haweyneydaan ayaana caado ka dhigatay in ay cabto kaadideda in…
Wiil 8 sano jir ah oo Maalintii Caba In ka badan 2 baakadood oo sigaar ah taas oo ay dad badan la yaabeen(Daawo Muuqaalkaan)
aadan21 / March 28, 2012
iftineducation.com – Wiil 8 sano jir ah oo u dhashay dalkaas Indooniisiya ayaawaxaa la sheegay in looga maaro waayey cabitaanka sigaarka iyadoona uu wiilkaas cabo maalintii sigaar ka badan 2 baakadood oo sigaar ah taas oo ayna dad badan la yaabeen ayna waalidkiisna ka muujiyeen wel wel aad iyo aad u badan. Wiilkaan yar oo lagu magacaabo Adi Ilham oo…
Nin Oday ah oo jira 70-Sano oo Muuqaalka Jirkiisa isku badalay Wiil 20-Sano jir oo kale (Daawo Sawirada)
aadan21 / March 27, 2012
iftineducation.com – Dr. Jeffrey Waa Nin Oday ah oo Jira 70-Sano hasa haaatee hada jirkiisa uu umuuqdo Wiil yar oo 20-Sano jir oo kale ah kadib markii uu sameeyay Aalmiito iyo Jiim fara badan. Ninkaan ayaa marka aad wajikiisa aragto waxaad mooda qof dhalinyaro ah oo wajiga xanuun ka saameeyay laakin saas ma ahan waa dhan dhalinta uu jiro Ninkan…
Daawo Mucjisadan Naxtinta Badan “Gabar Dhididkeedu Yahay Dhiig Ilinteeduna Tahay Dhagax Subxaanalaah”
aadan21 / March 26, 2012
iftineducation.com – Subxaanalaaah Bal kawaran qof ay dhowr dhib isugu darsameen oo misna dumar ah ? Gabar u dhalatay wadanka Yaman ayaa habeenkii koobaad ee arooskeeda waxaa jirkeeda kasoodaatay dhiig halkii uu dhidid kasoobixi lahaa, waxaana in dheheeda ka soo daatay dhagax halkii Ilin ay ka soobixi lahayd… Markaas kadib maxaa dhacay? YAA ILAAHI Bal eeg… Ninkii soo guursaday isla…
Farxiyo Fiska”Canugaan Waxaan u dhalay Bashiir Hanuuniye Waana Igu In kiray”Sir Muhiim ah”
aadan21 / March 25, 2012
iftineducation.com – Warar Goor dhaw Soo Gaaray Xafiiska Warqabadka Beeldeeq.com ee Magaalada London Dalka Ingiriiska Ayaa Sheegaya In Fanaanadda Farxiyo Fiska Ay Dacwad Ku soo oogtay Muusikiistaha Ay kala Tageen Bashiir Hanuuniye. Fanaanadda Ayaa Ku Tilmaamtay In Bashiir Hanuuniye uusan Noqon Karin aabe sababta Ayeey Ku Sheegtay In uu Ku In kiray Canug ay U dhashay. Hadalka Ka Soo Yeeray Fanaanadda…
Ma jirtaa nolol ka baxsan dhulka?
aadan21 / March 23, 2012
iftineducation.com – Cilmi baarayaasha ilaa haatan ma hayaan wax muujinaayo in ay jirto astaamo muujinaayo nolol dibadda ka ah dhulka. Dowladda Maraykanka waxay jawaab ka bixisay codsi ka yimid koox la yiraahdo Boga Internetka ee Dadweynaha oo ilaa 5,000 oo qof ay saxiixeen. Labo koox oo saxiixday ayaa labadaba ugu baaqday dowladda Maraykanka in ay soo bandhigto hadii ay wax…
Af-gambi ka Dhacay Dalka Mali : voasomali.com
iftineducation.com – Dalal uu Maraykanku ka mid yahay ayaa dhaleeceeyey af-gambigii ay ciidamadu u geysteen dawladdii dalka Mali. Maraykanka ayaa ku biiray cambaareymaha isa soo taraya ee loo jeedinayo wax u muuqda inay yihiin afgambi oo lagu sameeyay madaxweynaha Mali Amadou Toumani Toure ee ay sameeyeen askar fallaagowday. Hadal qoraal ah oo Khamiistan ka soo baxay aqalka cad ayaa ku…
Dhibaatada is badelka cimillada
iftineducation.com – Is badelka cimillada oo barakac keeni karo. Warbixintani oo laga soo saaray dalka Britain ayaa sheegtay in talaabo haatan la qaado ay baajin karto dhaqaalo tira badan oo mustaqbalka lagu bixiyo dagaalo ay sabab u noqon karaan is badelka cimillada. Prof John Beddington oo isagu loo xilsaaray cilmi baaristani ayaa sheegay in is badelka cimillada ay aad u…
Taariikhda Allaha U Naxariiste Col: C/llaahi Yuusuf Axmed oo Kooban.
C/Lahi Yuusuf Axmed waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo December sanadkii 1934. Markii uu waxbarashadiisa dugsiga dhexe iyo sare ku dhamaystay soomaaliya, wuxuuna galay kuliyada sharciga ciidamada, markaas kadib ayaa laba sano oo waxbarasho gaaban ah loogu diray talyaaniga sanadadii 1954-1956. Sanadkii 1957 dii ayaa loomagacaabay ku xigeenka taliyaha booliiska ee gobolka Benaadir, isagoo jagadaas hayay mudo sanad ah. jagadiisii…